04 NIGHTS / ụbọchị 05 | TR-904 njem njegharị
Ụgbọ njem (INR)
Ike ịnweta ígwè
01-04 Onye (s)
01-07 Onye (s)
01-13 Onye (s)
Ọnụahịa nke AC 45 AC AC, AC 41, AC 27 SEATER COACH ga-enye ya dịka ọ chọrọ.
IHE: Ụlọ nkwari akụ bụ agunyeghi. Nanị ngwugwu Ụgbọ njem.
Mgbe ị bịarutere ọdụ ụgbọ elu / ụgbọ okporo ígwè Bhubaneswar n'ụtụtụ / ehihie, bulie ma nyefee na Puri. Enroute ị ga-aga Dhauli (Ashokan Rock Edict na Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Konark Sun Temple (ebe a na-akpọkarị "Black Pagoda"), ụlọ Ramchandi na Chandrabhaga Beach. Lelee na nkwari akụ Puri. Freshen & relax at beach / shopping on beach beach. N'abalị na-anọ na Puri na ndokwa gị.
N'ọbịbịa ụtụtụ ka a mara aha Onyenwe anyị Jagannath Ụlọ Nsọ (Ndị Na-abụghị Ndị Hindu) ka ha na-ele anya n'ụtụtụ. Laghachi n'ụlọ nkwari akụ ma rie nri ụtụtụ gị. Mgbe ahụ gaa njem Satapada (ọdọ mmiri Chilika-nnukwu ọdọ mmiri nnu nke Eshia) .Utu mmiri ụgbọ mmiri na-ahụ Irrawaddy Dolphins na ọnụ mmiri oké osimiri (ebe izu mmiri na ọdọ mmiri dị ka Chilika Lagoon). Gaa na Puri. Na ụzọ ị ga-aga na ụlọ Alarnath. N'abalị na-anọ na Puri na ndokwa gị.
Taa nwere nri ụtụtụ gị ma lelee ụlọ nkwari akụ ma gaa na ụlọ nsọ ndị ọzọ dị ka: Ụlọ Sonar Gourang, Gundicha Temple, Ụlọ Nzukọ Loknath. Mbanye gaa Bhubaneswar. Na ụzọ ị ga-aga n'obodo nta nke Raghurajpur, Ụlọ Nzukọ Lingaraj, Ụlọ Nsọ Mukteshwar, Ụlọ Nsọ nke Rajarani wdg. Lelee na họtel. Freshen ma gaa na Khandagri-Udayagir Jain Caves. Achịcha abalị maka ịzụ ahịa na ahịa obodo. N'abalị na-anọ na Bhubaneswar na ndokwa gị.
Taa mgbe nri ụtụtụ gara ebe nlegharị anya dị ka: Nandankanan Zoo (Emechibidoro na Monday ma meghee site na 7.30 AM - 5.30 PM), Museum Museum (Bịaruo na Monday), Nri abalị na Ekamra hata (ahịa nka). N'abalị na-anọ na Bhubaneswar na ndokwa gị.
Kwa ụtụtụ mgbe ị gachara nri ụtụtụ chọpụta ma dọba gị na ọdụ ụgbọ elu iji jide gị n'oge ụgbọ elu maka njem ịlaghachi.
Ọnụahịa a dị irè ruo ọkwa ọzọ.
Enweghị ụlọ oriri na nkwari na njem ụgbọ njem ndị a.
A ga-enye ego nke AC 45-41-27 STR ụgbọ ala bara ụba dịka ọ chọrọ.
A ga-atụle kilomita na oge site na nbanye ụgbọala na ụgbọala.
Ngwongwu a gụnyere oge ọnụ, ịkwọ ụgbọala.
Ahịa bụ ihe ndabere dịka ọ bụ naanị usoro ihe omume na na Point ruo isi, enweghị ike ịgwọ dị ka mkpofu.
Ahịa bụ NETT na ndị na-abụghị ndị ọrụ.
GST dị na Ọnụ ego niile.